Dabaysha ayaa qabow korayo. Maalmaha koraan gaaban oo dhan, iyo caleemo keenay nabad iyo nolol sida xagaagan oo dhan hadda way engegaan, isbeddel, oo ku dhici. Haa, waxaa la gaaray waqtigii in sanadka mar kale.
Sida waqti fiican oo sheekooyin ah sixir, ugu sarraysa, oo aan la sharrixin oo ah, waxaan kaliya jecel xilliga sanadkan. Dhab ahaantii, ma aha in aad u baahan tahay wax awood ka sarraysa ama miisaaniyad weyn Halloween si ay u abuuraan a video naftu dhabta ah ama dhintay oo socda - aad kara ka dhigi Halloween kuu gaar ah videos aan jabiyay aruur- aad. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah saamaynta movie farxaan, waayo, waxaad isku dayaan in ay ka soo.
Dab Green had iyo jeer yimaado la påskkäringar, iyo Jinku iyo noocyo kale ah sixir iyo fasaad. Samaynta dab cagaaran waa uun trick fudud ee kimistari. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa acid boric, kaas oo laga heli karo dukaamada badan, iyo methanol ama methyl khamriga, taas oo u adeegta sida daaweynta shidaalka ah ee sahayda baabuurta. Waa kuwan tallaabooyinku:
1. Ku shub acid boric yar weelka dab-ammaan ah.
2. Ku dar qadar yar oo ah methanol, iyagoo taxaddar in aad ka fogaato wax kasta oo daadinta gacmahaaga.
3. Light dab!
Waa wax fudud in la abuuro saamayn muuqasho. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa editor video awood u isticmaalaya raad gaar ah iyo dejinta opacity . Halkan soo tallaabooyinka:
1. Calan camera iyo jire mudista. Waa in aad ku soo gani goobta labo jeer, mid waa iyada oo aan ku naf baxay oo kale la actor ka dhacda. Waxaa muhiimad weyn in labada qaadataa yihiin identically waxbuu, sidaas sii jeeda weli hana dhaqaaqin camera ah oo dhan.
2. Import labada qaadataa ee tallaalka laga galay aad software video tafatirka. Ku rid shot madhan wadada video ugu horeysay oo ka dhacda toogtay wadada labaad.
3. Set opacity ee ka dhacda toogtay si loo gaaro natiijada ugu fiican.
Saamaynta gaar ah ugu caan ah oo spooky Halloween video waxaa mar walba lagu samaynta dhiig been abuur ah. Google "sida loo sameeyo dhiig-abuur ah" arbushin doonaa tan oo siyaabo, laakiin karinayo ugu badan ee ah sameynta waa sida soo socota:
1 koob oo galeyda
Biyo 1 qaado
2 qaado oo ah midab cas oo cunto
1/2 qaado oo midab cagaar ah cunto, taas oo ka dhigaysa in ka badan ayuu dhiigga oo kale ah
Ka sokow cuntada, kuwaas oo, waxaa kale oo jira noocyada kala duwan ee dhiiga digital sida splatters dhiig, godad rasaas iyo dulanka kale post-soo-saarka. Si fudud waxaad ka heli kartaa oo kala duwan clips dhiig digital pre-matted ay bixiyaan shirkadaha sida Motiondrops iyo Video Copilot, kuwaas oo si fudud loo composited karaa aad footage.
Xusuusnow in inkasta oo ay qaar ka mid ah dhiig digital muuqataa weyn, waa in aad lacag bixisid si aad saxo midabka fiiro gaar ah. Iyada oo aan la tixgelinayo shuruudaha soodejinta wada baabbi'in dhalanteed ah.
Qaybo ka Body Fake
Qaybo Body noqon kartaa fikrad kale spooky aad video Halloween. Markaasaa waxaa jira siyaabo qaar ka mid ah fududahay in arrintaas aad u gaadho kaliya maaddooyinka jikada qaar ka mid ah. Cuntada waa sida soo socota:
2 qaado budada galleyda
Biyo 4 qaado
2-5 lagu dhibciyo midabaynta cuntada casaan
1/2 qaado shaah mix kookaha (la marshsmallow waa uu fiican yahay)
Hadda qas budada galleyda, midabaynta cuntada iyo biyaha wada. Markaas qaso budo kookaha ah. Waa caadi haddii kookaha foomamka busta qashinka, sida ay u eg xinjiro dhiig. Markaas riix ey isku wajaheen kooxda reer maddiibadda si ay u sameeyaan qaabab xubin isticmaalaya farahaaga. Si gudcur xubnaha, aad qashin badan oo budada galleyda, ama isku darka Coca qasan kartaa.
Onkod iyo Hillaac leh Saamaynta
Ugu wanaagsan Halloween videos sida caadiga ah qaadan meel on habeen mugdi ah iyo duufaanka. Si aad u dhigay niyadda ee Halloween videos, tixgelin saameyn this. Waa arrin sahlan in lagu daro saamayn onkod iyo Hillaac leh inta aad qabto video software tafatir sida iMovie, kaas oo bixiya noocyada kala duwan ee saamaynta video.
> Resource > Video > Qaybaha Spooky iyo Saamaynta for Your Videos Halloween